Disney's D.Magic Portal
With the mobile app for Wreck It Ralph you can game-hop between the three classic arcade games from the film. Jump as high as you can in ... With the mobile app for Wreck It Ralph you can game-hop between the three classic arcade games from the film. Jump as high as you can in Sugar Rush, Sweet Climber, Fix Ralph's destruction inaplayable version of the Fix It Felix Jr., and defeat swarming cy-bugs in Hero's Duty. ပိုမို ပြမယ်
450 KS/WK နဲ့ အဖွဲ့ဝင်လိုက်ပါ။
အကောင်းဆုံး ပရိသတ် ဖြစ်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ
ဧပြီမှာ ပြန်လည် အဖွဲ့ဝင်ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ထပ်မံလာခဲ့ပါ။ ပထမ တစ်ပါတ် အခမဲ့ အစီအစဉ် အတွင်း အဖွဲ့သို့ ထပ်မံ ပြန်လည် ဝင်ရောက် ခြင်းများကို ဆိုင်းငံံ့ ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သင် အဆင်ပြေ စေရန်အတွက် လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိနားလည်စေလိုပါသည်။
D.MAGIC အဖွဲ့ဝင်ပြီးထုတ်လုပ်မှု တွေကို ခံစားလိုက်!
ဤဝန်ဆောက်မှု ထံမှ ဂိမ်း၊ အပ်္ပလီကေးရှင်း နှင့် အခြားထုတ်လုပ်မှု များကို ဒေါင်းလုဒ် ပြုလုပ်ရန်အတွက် တစ်ပါတ်ကို ၃၁၅ ကျပ်ဖြင့် D.MAGIC အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့၊ D.MAGIC! အဖွဲ့ ကိုဝင်လိုပါတယ်။
ပထမဆုံး တစ်ပါတ် အခမဲ့
ထူးခြား ဆန်းကြယ်တဲ့ ဒစ်စ္စနေ ရဲ့ ကမ္ဘာကို ဝင်ရောက် လေ့လာ လိုက်ပါ
တစ်ပါတ်ကို ၃၁၅ ကျပ်ဖြင့် D.MAGIC အဖွဲ့ သို့ဝင်လိုပါသလား?
သင်သည် ပြင်ပ တတိယပါတီ ပေါ်တယ် (portal) ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုကို ဝင်ရောက် အသုံးပြု နေခြင်း ဖြစ်ပြီး အပါတ်စဉ် ကျသင့်ငွေ ၃၁၅ ကျပ် အပြင် အကယ်၍ သင် ဤပေါ်တယ် ထံမှ ထုတ်လုပ်မှုများ ထဲမှ အပိုဆောင်း ထပ်မံ ဝယ်ယူရန် ရွေးချယ် ပါက ကျသင့်ငွေ ကို သင့် ဖုန်းလက်ကျန် ငွေ ထဲမှ နှုတ်မည် ဖြစ်သည့် အတွက် သင့် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းနံပါတ် ကိုအသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုချက် ပေးပါသည်။
ကျေးဇူးပြုပြီး သင့်ရဲ့ ဝိုင်ဖိုင် (WiFi) ကိုပိတ်ပါ
ရှေ့ဆက် သွားရန် အတွက် ကျေးဇူးပြုပြီး သင့်ရဲ့ ဝိုင်ဖိုင် (WiFi) ကိုပိတ်ပါ။
D.MAGIC အဖွဲ့ ဝင်ရန်
ရွေ့လျား ဝေါလ်ပေပါ များ
ကျွန်ုပ် အကောင့် လိုက်နာရန်များ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လုံခြုံမှု ပေါ်လစီ အကူအညီ FAQ
ဤ ဝန်ဆောင်မှု 8elements မှ သင့်ထံသို့ ယူဆောင်လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။. © 2020. All rights reserved.
Winnie the Pooh ©Disney. Based on the "Winnie the Pooh"
works by A.A. Milne and E.H. Shepard
©2020 & ™ Lucasfilm Ltd